काठमाडौं – ‘धूलोले गर्दा मैले आँखा नै कम देख्न थालेकी छु । डाक्टरलाई देखाउँदा आँखामा रस (आँसु) आउने प्वाल टालिएकाले यस्तो समस्या आएको भन्नुहुन्छ । यो धूलोले त रोगी नै बनायो,’ काठमाडौंको बौद्धमा विगत ५ वर्षदेखि कार्पेट पसल सञ्चालन गर्दै आएकी शान्ति रिजालको गुनासो हो यो । रिजाल त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, राजधानीका हरेक मानिसको गुनासो हुने गर्छ, धूलोधूवाँले रोगी नै बनायो ।
सडक विस्तार, खानेपानीको पाइप लाइन विस्तार, निर्माण सामग्री जताततै थुपार्ने प्रवृत्ति र कच्ची लिंक रोडहरूका कारण काठमाडौं उपत्यका धुलाम्मे हुन थालेको वर्षौं भइसक्यो । काठमाडौंको चाबहिल, पुरानो बानेश्वर, नयाँ बसपार्क, बालाजु–बाइपास, बल्खु, बौद्ध लगायतका स्थानमा धूलोको समस्या अत्यधिक छ ।
कलंकी–नागढुंगा सडक खण्ड आसपासका बासिन्दाको नियति पनि उस्तै छ । घरभित्र बस्दा पनि धूलो आएर बिरामी पार्न थालिसक्यो । ‘घरमा सुत्दा पनि मास्क लागाउनुपर्छ,’ नैकापमा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका धनवीर महर्जनले भने, ‘धूलेले खोकी लागेर टिभी नै भयो, ८ महिना औषधि खाएपछि निको भयो ।’
उपत्यकाको प्रदूषण मापन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘वायु गुणस्तर मापन केन्द्र’ स्थापना गरी रानीपोखरी रत्नपार्क लगायत उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा प्रदूषण मापन यन्त्र राखेको छ ।
आँखाले देख्न नसक्ने पार्टिकुलर म्याटर (पीएम) १०, पीएम २.५ र टोटल सस्पेन्डेड पार्टिकुलेटको तथ्यांक संकलनका लागि उक्त यन्त्र राखिएको हो ।
करीब २ साताअगाडि पानी पर्नुअघि रत्नपार्क क्षेत्रमा प्रदूषण १ हजार ४ सय ४ क्युबिकसम्म पुगेको विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेलले बताए ।
पौडेलका अनुसार पानी परेपछि केही दिन कम हुने प्रदूषण पानी रोकिएपछि फेरि बढ्ने गरेको छ ।
‘प्रदूषण सन्तुलन हुन १ सय २० क्युबिक तथा प्रतिसेकण्ड २.५ पीएम हुनुपर्दछ, यसभन्दा माथि भएमा वातावरण सन्तुलन भएको मानिँदैन,’ पौडेलले भने, ‘धूलो र धूवाँले गर्दा प्रदूषण बढिरहेको छ ।’
उपत्यकाका सडकको धूलो र सवारी साधनबाट निस्कने धूवाँले वातावरणमा स–साना कणहरू उत्सर्जन गर्ने जसले गर्दा मुटु, फोक्सो तथा क्यान्सरका रोग निम्तिने समस्या रहेको वातावरणविद् भुषण तुलाधर बताउँछन् ।
‘यहाँका सडकमा गुड्ने गाडीले फाल्ने धूवाँमा ट्याक्सिनोजेनिक (क्यान्सर बनाउने केमिकल) हुन्छ, जसले क्यान्सर र मुटुरोगी बनाउन सक्छ,’ उनले भने ।
रोगी बनाउने धूलोधूवाँ
धूलो र धूवाँले मानव स्वास्थ्यमा तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउने त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका श्वासप्रश्वास विषेशज्ञ डाक्टर सन्तकुमार दास बताउँछन् ।
डाक्टर दासका अनुसार तत्काल सबैभन्दा धेरै दम खोकीका बिरामीलाई असर पर्छ । यस्ता रोगीमा औषधिको असर पनि कम हुने समस्या निम्तिएको उनले बताए ।
‘दीर्घकालीन रूपमा इन्टर एक्टिसिएल डिजिज (फोक्सो सुक्ने रोग), सीओपीडी क्रोनी अक्सिटव डिजिज (फोक्सोमा एलर्जी) जस्ता रोग निम्तिन्छन्,’ डा. दासले भने ।
कसरी आउँछ काठमाडौंको सडकमा धूलो ? [भिडियो रिपोर्ट]